Aqriso Gabdhaha Halka ay Ka Helaan Dareenka Xoogan, iyo Baahida Kulanka Deg deg ah… | Gaaloos.com
Home » galmada » Aqriso Gabdhaha Halka ay Ka Helaan Dareenka Xoogan, iyo Baahida Kulanka Deg deg ah…
Aqriso Gabdhaha Halka ay Ka Helaan Dareenka Xoogan, iyo Baahida Kulanka Deg deg ah…
Sida la wada ogyahay dareenka waa aas-aaska Galmada sida aan wada ognahay waxa uuna leeyahay wadooyin sahla oo ugu danbeyntii kugu toosiya in aad ku guuleysato mariinka Galmada wanaagsan ee dhibta aanan keenin.
Calaacasha gacanta oo la dhunkadaa ma laha istiin sidaasi u sii ridan, ha yeeshee waxa uu sii kordhaa kolba marka dhudhunka iyo gacanta xaggeeda sare loo sii dhaqaaqo, gaar ahaan dhanka gudaha.
Waxa loo baahan yahay ah in fanka cayaarsiinta aan loo adeegsan oo qura bushimaha, sababta oo ah sida bushimaha oo kale amaba kasii daran bay labada gacmoodna qayb lixaad uga qaataan fankaasi, iyaga oo weliba gaara goobo istiin aanay bushimuhu gaari karin.
Taataabashadu waxay inta badan istiin ku abuurtaa qofka taataabtaha ah, waxayse ku xiran tahay xaaladda nafsiyadeed ee labada ruux. Waxa laga yaabaa inay taataabashadu mararka qaar keento natiijooyin aan loo aayin, sida la-taataabtaha oo xanaaqa haddii uusan raalli ka ahayan waxa dhacaya.
Inkasta oo taataabashada ama salaaxistu ay jirka oo dhan raad ku wada reebto, haddana jirku isku si’ uma wada dareemo, waxana uu istiinku sii kordhaa kolba marka loo sii dhaadhaco dhinaca shafka ilaa laga gaaro labada naas. Waxaynu aragnaa in waqtiga isdhexgalka, dhabarka iyo barida oo la salaaxaa ay iyana istiin ba’an keenaan. Goobaha istiin qaadashadu guud ahaan, waxay ku badan yihiin agagaaraha daloollada jirka, labada naasna waxa lagu tiriyaa inay kamid yihiin goobaha ugu istiinka badan jirka, waxaana uu gaaraa heerkiisa ugu sarreeya kolka la maraanmaro ibaha naasaha. Waxa jira dhowr hab oo loo maraanmaro ibaha naasaha loona kiciyo dareenkooda waxaana kamid ah in carrabka lagu salaaxo ama bushimaha lagu qabto ama ilkaha si aayar ah loogu qanqaniino.
Title: Aqriso Gabdhaha Halka ay Ka Helaan Dareenka Xoogan, iyo Baahida Kulanka Deg deg ah…